Te hanana Hoditra malandina, mazava loko | Univers féminin et de la Mode à Madagascar
Isan’ny vehivavy malaza ho tsara hoditra eran-tany ry zareo japoney. Amin’ny ankapobeny dia malandina ny hoditr’izy ireo, madio ary mazava loko tsara ihany koa. Raha ny tena marina anefa dia ny fahazaran’izy ireo mikarakara hoditra isan’andro no hananan’izy ireo an’ireny kalitaona hoditra voafantina ireny. Azontsika tahafina ny tsiambaratelon’izany.
Manara-maso ny fatran-drano sotroina
Lakile voalohany, hananana hoditra malandina sy zara raha misy olana ny fahampian-drano. Misoroka ny fipoiran’ireo tranga manambara fahanteran’ny hoditra rahateo izany. Tsotra ny fomba atao hanamarinana raha ampy na tsy ampy rano ny hoditra. Hamainina tsara ny fela-tanana anankiroa dia apetaka eo amin’ireo takolaka roa ary atao mahazo ny sofina, ny ankihiben-tanana. Rehefa mipetraka tsara eo izy ireo dia somary tsindriana mafimafy ny tanana ary esorina moramora. Raha manaraka ny fela-tanana ny takolaka dia ampy rano tsara ny hoditra. Raha tsy misy manaraka mihitsy dia tsy ampy rano izay ny hoditrao. Averimberina matetika ity fomba ity.
Mamela ny vatana halalaka
Isa-kerinandro, manokàna 24 ora ho an’ny vatana, tsy hanosorana akora mihitsy na ho an’ny volo na ho an’ny hoditra, na ho an’ny hoho, … Mandrisika ny fihavaozana sy ny fahasitranan’ny hoditra amin’ireo kilema mety hahazo azy izany.
Rehefa matro-doko sy maina na miofakofaka ny sofina dia tokony ho tonga saina fa miha-antitra ny hoditra ary reraka. Raha mitohy ny tsy firaharahiana azy dia hiitatra eny amin’ny hodi-tava, hodi-tenda, … ary dia ho hita mibaribary. Noho izany, aza adino ny mikarakara sofina mba tsy hiitaran’ny fahanterana manerana ny vatana.
Manao “gommage” isa-kerinandro
Manala ny sela maty sy ny loto tafalentika any anaty hoditra ny fampiasana akora manadio hatrany ifotony na ireo « produits exfoliants ». Tandremo anefa fa ireo malefaka irery ihany no ampiasaina, mba tsy hanimba ny hoditra. Raha atao isa-kerinandro anefa izy ity dia mila teknika. Afangaro amin’ny akora fanadiovana tarehy isan’andro ilay akora fanaovana “gommage” ary somary afanaina amin’ny tanana vao ahosotra.
Miaro amin’ny masoandro
Ny fahavoazana ateraky ny masoandro no maha-antitra sy mahafeno tasitasy vetivety ny tarehy ary mampipoitra ireo kentrona farak’izay haingana. Ho an’ny andro mahamay sy midanik’andro be dia ireo « crème solaire » misy tahana SPF +50 no ampiasaina. Raha toa miraikidraikitra be dia azo afangaro amin’ny “crème du jour” na ny “base de teint”, isaky ny hanosotra azy. Ho an’ny andro maloka sy mangatsiaka kosa, dia ireo « soin du jour » efa misy fiarovana amin’ny masoandro no ampiasaina.
Torohevitra nalaina tao amin’ny Pejy FB : Conseil ET Partage